Tattoo yaryar oo loogu talagalay curcurka | Tattoo
Tattoo yar oo xarrago leh oo caqli badan
Nat Cerezo | 11/10/2021 08:26 | La cusbooneysiiyay 11/10/2021 08:57 | Tattoo gacanta
Waqti aan sidaa u fogeyn waxaan horey u daabacnay maqaal ku saabsan tattoosyada yaryar ee curcurka. Haddii ay jiraan wax qurux badan oo ku saabsan noocyadan tattoo -yada ah, waa marka laga reebo inay caqli badan yihiin, inay aad u xarragoonayaan. Xataa dareenka waxaan ku dhiiran lahaa inaan dhaho.
Sidii aan sheegay waqtigaas, curcurka ayaa ka mid ah meelaha ay ugu jecel yihiin haweenku inay yeeshaan tattoo -koodii ugu horreeyay. Suurtagalnimadu way badan tahay, in kasta oo isbeddelku mararka qaarkood door aad u muhiim ah ka ciyaaro. Marka xigta waxaan ku siin doonaa dhowr fikradood oo ku saabsan tattookan iyo sida looga faa'iidaysto.
1 Fikradaha iyo macnaha tattoos ee curcurka
1.1 Tattoo wadnaha
1.2 Tattoos Rose
1.4 Tattoo xiddig
1.6 Tattoo barroosin yar
1.8 Tattoo Semicolon -ka Yar
2 Sida looga faa’iidaysto
3 Tattoo ku taala curcurka miyuu dhaawacaa?
4 Waa maxay qiimaha tattoo yar?
5 Sawirrada Tattoos curcurka
Fikradaha iyo macnaha tattoos ee curcurka
Weedho, astaamo yaryar sida xiddigaha ama xayawaanka sida shimbiraha ama silhouette maroodiga quruxda badan ayaa ka mid ah tattooyada ugu badan ee aan ka heli doonno curcurka dad badan. Hadda, sidaan idhaahdo, ma aha fikrad khaldan, in kasta oo moodadu ay ku dhowdahay in aan ka fikirno. Haddii aan ka fikirno, waxaan samayn karnaa noocyo badan oo kala duwan Tattoo curcurka. Wax walba waa arrin dhadhan iyo waxa aan maskaxda ku hayno.
Xulashadan yar ee tattoo -yada yar -yar ee curcurka waxaan ka heli karnaa noocyo kala duwan oo tattoos ah sida geedaha, shimbiraha, xarfaha ama astaamaha. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer madow iyo adigoon culeys ku saareyn tattoo. Kuwani inta badan waa kuwo fudud, ganaax iyo istaroog siman.
Tattoo -ga wadnaha ayaa aad caan u ah badanaana waxay matalaan farxad, xamaasad ama daqiiqad jacayl nolosheena. Marka loo eego midabkeeda waxaa loola jeedaa hal shay ama mid kale. Tusaale ahaan, wadnuhu madow wuxuu astaan ​​u yahay in qofku marayo heer baroordiiq ah iyo midabka jaalaha ah bilow cusub. Sababtoo ah kala duwanaanshahan, waxay ku habboon yihiin inay xidhaan qaybtan jidhka.
Ubaxyada sidaas oo kale ah waxay astaan ​​u yihiin waxyaabo badan oo wanaagsan sida naxariista, mahadnaqa, naxariista iyo quruxda qofka. Inkastoo sidoo kale macnihiisu wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran midabka ubaxaas. Tusaale ahaan, casaanku macnihiisu waa dembi la’aan, madow wuxuu astaan ​​u yahay khasaare, guduuduna waxay astaan ​​u tahay kalgacalka. Dhanka kale, haddii aad aad u jeceshahay ubaxyada, waxaad ku qori kartaa tufaaxa ubaxa ilaa bouquet dhan, illaa inta ay safka ku fudud tahay waxay u muuqan doontaa mid aad u wanaagsan.
Tattoo -yada iskutallaabta ah ayaa badanaa lala xiriiriyaa diinta kiristaanka oo gogoshaas yar -yar sida caadiga ah kaligood ayay tagaan ama waxaa lagu daraa sawirro laamaha saytuunka, qoolleyda ... Intaa waxaa dheer, waxaa jira iskutallaabyo kale oo badan oo aan wax yar ama waxba ku lahayn diinta Masiixiga sida iskutallaabta Celtic oo astaan ​​u ah rajada ama ankh (nooc ka mid ah iskutallaabta Masaarida) oo astaan ​​u ah nolosha.
Tattoo xiddiguhu waxay leeyihiin macno badan. Waxaan leenahay xiddigaha samada oo u ahaa hage u -hibeeyayaal badan oo ka mid ah kuwa macnahooda ugu badan yahay hagaha, yacni xiddigtaas aad tattooed ku calaamadisay koorsada. Ciidanka dhexdiisa waxaa jira karbaashyo badan oo ay matalaan xiddigo, sidaa darteed waxay kaloo noqon kartaa astaan ​​sharaf.
Tattoo gacanta oo yar oo caadi ah waa taatiko taariikheed. Waxay kuu noqon kartaa taariikh muhiim kuu ah. Dhalashadaada, dhalashada ilmahaaga, maalinta arooskaaga, geerida qaraabo ama saaxiib dhow ...
Tattoo barroosin yar
Tattoo -yada barroosinka waxay ahaan jireen tattoos badmaaxiin ah, in kasta oo hadda sida tattoosku ay noqdeen kuwo aad u muuqda oo farshaxannimo badan ayay heleen macnayaal cusub. Sida, tusaale ahaan, xoog ama adkaysi, sababo cad awgeed; si loo maamuuso qof qoyska ka tirsan ama saaxiib ama xitaa matala xiriir weyn oo badda ah.
Calaamadda aan dhammaadka lahayn waa mid ka mid ah tattoosyada ugu caansan adduunka. Waxay leedahay macnayaal dhowr ah, sida tattoo -yada oo dhan, mid ka mid ah ayaa ah in bani -aadamku leeyahay awood aan dhammaad lahayn si uu u gaaro waxa uu damacsan yahay inuu sameeyo. Mid kale ayaa tilmaamaysa aaminsanaanta dib -u -dhalashada, oo awood u leh inay tilmaamto in wax aan dhammaad lahayn, si kasta oo ay u muuqato dhammaad, wax walbaba waxay bilaaban doonaan mar kale, taas oo sidoo kale lala xiriirin karo wareegga xilliyada.
Tattoo Semicolon -ka Yar
Semicolon -ka badiyaa wuxuu tilmaamayaa inaad qabtid (ama ku dhacday) niyad -jabka, balwadda, inaad isku dayday inaad is disho ama aad ku xanuunsato nooc ka mid ah jirro maskaxeed. Waxa kale oo dhici karta in qofka ku dhejisan tattoo uu leeyahay xubin qoyska ka tirsan ama saaxiib ah oo soo maray mid ka mid ah xanuunnadaas oo doonaya inuu muujiyo midnimo. Waa naqshad kaamil ah si loo muujiyo marxaladda hagaajinta iyo xusuusinta xooggaaga gudaha.
Sida looga faa’iidaysto
Caadiyan Tattoo -ku gacmaha. Taas micnaheedu ma aha in yaabab run ah aan la samayn karin, laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in mar kasta oo uu istarooggu sii bato, sida ay isugu dhow yihiin oo u sii dhumuc weyn yihiin, waxaannu halis ugu jirnaa in, waqti ka dib, ay aakhirka noqdaan khal khalka Marka kiisaskaan, fududeynta ayaa lagula talinayaa wax walba oo kale.
Sidoo kale, Noocyada noocaan ah ee tattoos -ka ayaa badanaa leh khad madow sabab la mid ah. Tan micnaheedu ma aha in midabka aan la isticmaali karin, in kasta oo ay u badan tahay uun faahfaahin. Xaaladdan, waxay ku habboonaan lahayd inaad kala hadasho farshaxankaaga tattoo si aad u aragto waxa la samayn karo.
Tattoo ku taala curcurka miyuu dhaawacaa?
Ma aha aagga ugu xanuunka badan ee jirka oo aan ka heli karno tattoo, laakiin waxay ka xanuun badan doontaa meelaha sida dhudhunka ama garabka. Sida had iyo jeer, xanuunku aad buu ugu tiirsan yahay mid kasta, maadaama qof kastaa leeyahay marinkiisa.
Waa maxay qiimaha tattoo yar?
Caadi ahaan qiimaha ugu yar wuxuu noqon karaa qiyaastii 60 euro, in kasta oo tani ay ku xiran tahay istuudiyaha kasta, farshaxan kasta oo tattoo ah iyo taatoofka uu qofku rabo inuu helo. Waxay u ekaan kartaa qaali In kasta oo ay tahay in lagu xisaabtamo in ay jirto kharash loogu talagalay farshaxanka tattoo ee khad iyo cirbadaha, waqtiga la galiyay samaynta iyo diyaarinta naqshadda. Waxaan ka hadleynaa shaqo farshaxan taasna waa inaanan iska dhaafin, horeba waad u taqaan sida loo yiraahdo: raqiis waa qaali.
Sidaad arki karto, waxaad haysataa fursado badan oo aad tattoo ku samaysato gacantaada.Kaliya waa inaad adigu heshaa oo aad madaxa ku quustaa si aad u hesho farshaxanka tattoo ee aad ku kalsoon tahay inuu sameeyo inta soo hartay. Waa maxay naqshadda aad ugu jeceshahay? Miyaad ka doorbiday midab ahaan ama madow iyo caddaan? Ma ku leedahay shaati gacmahaaga?
Sawirrada Tattoos curcurka
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo gacanta » Tattoo yar oo xarrago leh oo caqli badan
Tattoo timo loogu talagalay haweenka, oo muujinaya dhinacooda ugu xun
Dhaawacyo sinta miskaha iyo muruqyada